ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်မှုကြီ: | Mg Ogga's Notes
Mg Ogga / February 10, 2009
ကောင်းသော အလုပ်ကိုလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးကို ရ၍ကောင်းသော အလုပ်ကို လုပ်လျှင် မကောင်းကျိုးကိုရ၏။ ဓမ္မ၏နိယာမအတိုင်း ဖြစ်၏။ဓမ္မနိယာမအတိုင်း ဖြစ်အောင် ဓမ္မက ဆောင်ရွက်သည်။သိုရာတွင် ဓမ္မနိယာမကို
ပြောင်းပြန် လုပ်သူများသည် မကောင်းသော အလုပ်ဖြင့် မကောင်းကျိုးကို ရရှိတတ်ကြသည်၏။ကောင်းသော အလုပ်ဖြင့် မကောင်းကျိုးကို ရရှိတတ်ကြ၏။
ဤဓမ္မနိယာမ ကိုပြောင်းပြန် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒုစရိုက်သမားများက ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး သုစရိုက်သမားများ က ဆင်းရဲကြ သည်ကို မျက်စီအောက်ပင် တွေမြင် ကြရလေရာ ဓမ္မနိယာမ ဟူသည် မှန်ကန်မှမှန် ကုန်လေရဲ. လား ဟူ၍် မေးခွန်းထုတ်တတ်လာကြ၏။ကုသိုလ် နှင်အကုသိုလ် အပေါ် သံသယ ရှိတတ်ကြ၏။
ဒီလို မေးခွန်းထုတ် သံသယရှိသူများတွင် ဗုဒ္ဓ္မဘာသာဝင်များလည်း ပါဝင် ကြသည်။ထိုသိုပါဝင်လာသော်လည်း
သူတို.သည် ကမ္မဿကတ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမည်ခံသူများ ဖြစ်ကြသည့် အားလျှော်စွာ ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ်
အပေါ် သံသယရှိကြောင်း ၀စိကံဖြင့် လည်းမဖော်ပြရဲကြ၊ ကာယကံဖြင့်လည်းမဖော်ပြရဲ.ကြ။
သို.သော်မနောကံဖြင့်ဖော်ပြနေကြသည်။ထိုသို.ဖော်ပြနေသည်ကို သူတို.၏ နေ.စဉ်လက်တွေ.ဆောင်ရွက်ချက်
များ မှထောက်ဆ၍်ျ သိရ၏။သိုဖြစ်သော်လည်း သူတို.သည် သူတို.ကို ယ်သူတို. ဗုဒ္ဓ္မဘာသာဝင် စစ်စစ်ဖြစ်ကြာင်း
ဓမ္မနိယာမ ကိုလက်ခံကြောင်း၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်အပေါ် သံသယမရှိကြောင်း တဖွဖွ ပြောဆိုတတ်ကြ၏။
လောက မျက်မြင်အရလည်း ကုန်သည်လောက၊ ၀န်ထမ်းလောက မည်သည်လောကတွင်မဆို ဖြတ်လမ်းသမား
များက ကြီးပွားကြပြီး၊ လမ်းဟောင်းသမားများက နိမ့်ကျနေသညါကို တွေရ၏။ထိုကြောင့်ဓမ္မနိယာမ အပေါ်မယုံ
ကြည်ဘဲ ကုသိုလ် အကုသိုလ် အပေါ် သံသယ ရှိသူများ က ကုန်သည်လောကတွင်လည်းကုန်သည်အနေဖြင့်
မတော်မတရား ရောင်းချလျှင် အမြတ်များများ ရ၍ကြီးပွားလွယ်၏။ ၀န်ထမ်းလောက ၌လည်း ၀န်ထမ်းအနေဖြင့်
မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်သည်ထက် မိမိ၏ အထက်အရာရှိ၏ဝေယျာဝစ္စများကို
လိုလေသေးမရှိ လေအောင် ထမ်းဆောင်ပါက ရာထူးမြန်မြန် တတ်သဖြင့် ကြီးပွားလွယ်၏။ တခြားရေးရာ၌
လည်းထိုနည်းအတိုင်း ရိုးရိုးမှန်မှန် လုပ်သည်ထက် ဆန်းဆန်းနှင့်မှားမှား လုပ်ပါက ကြီးပွားမြန်၏။
ထိုကြောင့် ဓမ္မနိယာမအတိုင်း မဟုတ်ပဲ မကောင်းသော အကုသိုလ်လုပ်ငန်း ကကောင်းကျိုးပေးနေသည်ကို
လက်တွေ.ခံစားနေရသဖြင့် ဓမ္မနိယာမ အပေါ် မယုံကြည်ဟူ၍ ဆိုရင်လည်း ဆိုထိုက်ပါ၏။ကုသိုလ်ကံနှင့် အကုသိုလ်ကံ အပေါ်သံသယ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုထိုက်ပါ၏။အမှန်အားဖြင့် ဒေသနာထက် လက်တွေ့က
ယုံကြည်မှုကို ပို၍ အားကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ၏။ဤသည်မှာ မငြင်းနိုင်သော သက်သေပြချက်ပင်ဖြစ်၏
ဓမ္မသည် သူသဘောကို သူဆောင်၏။ သစ္စာသည် ရှေ့နောက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်အောင် ဆက်စပ်ပေး၏။
ရှေ့နှင့်နောက် ဆိုသည်မှာ စိတ်က ကြံစည်သည့်အတိုင်း နှုတ်က ပြောဆိုရာတွင စိတ်နှင့်နှုတ် ရှေ့နောက် ညီညွတ်ခြင်း၊စိတ်က ကြံစည်သည်.အတိုင်း ကိုယ်က ပြုလုပ်ရာတွင် စိတ်နှင့်ကိုယ် ရှေ့နှင့်နောက် ညီညွတ်ခြင်း
နှုတ်က ပြောဆိုသည် အတိုင်း ကိုယ်က ပြုလုပ်ရာတွင် နှုတ်နှင်.ကိုယ် ရှေ့နှင့်နောက် ညီညွတ်ခြင်း တို.ပင် ဖြစ်၏။
ဤသည်ကိုပင်`ကံ´များအချင်းချင်း သစ္စာရှိသည်ဟု ဆိုရ၏။ ဓမ္မ္မအပေါ်သစ္စာရှိခြင်းဟူ၍လည်း ဆိုရ၏။
ထိုသို့မဟုတ်ပဲစိတ်က တမျိုးကြံ၊ နှုတ်ကတမျိုးပြောခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ စိတ်က တမျိုးကြံ၊ ကိုယ်က တမျိုးလုပ်ခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ကတမျိုးပြော၊ ကိုယ်က တမျိုးလုပ်ခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ `ကံ´ အချင်းချင်း သစ္စာဖောက်ခြင်း မည်၏၊ ကံအချင်းချင်းအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းသည်ပင် ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းမည်၏။ လောကအကြောင်းအရ ပြောလျှင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးက သစ္စာဖောက်ခြင်းသည်လည်း ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းမည်၏။ ဓမ္မအကြောင်းအရာရ ပြောရရင်လည်း ကံများအချင်းချင်း တစ်ခုအပေါ် တစ်ခုက သစ္စာဖောက်ခြင်းသည်လည်း ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။
သက်ရောက်အားနှင့် တန်ပြန်သက်ရောက်အားတို.၏ နိယာမအရ ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စေ၊ ကံကဖြစ်စေ ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ပါက ဓမ္မသည်မလွဲမသွေ တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်၏။ ဓမ္မသည် တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရပါက ဓမ္မကလည်း ပြန်လည်တိုက်မည် ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ နိယာမ ဖြစ်၏။ ဤနိယာမကို ဓမ္မသည်မကျော်လွန်နိုင်။
ဓမ္မအပေါ်သစ္စဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု တောင်လေးလုံး ဆရာတော်ကြီးက သူ၏ ပညာပါရမီ အလင်းပြကျမ်း စာမျက်နှာ (၅၀)၌ ဤသို့ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။
`ကျော်ကြားမှု၊ ဘုန်းကံ ကြီးမားမှု၊ လာဘ်ပေါများမှုများကိုမငဲ့ကွက်မူ၍ မိမိ တက်သိသလို တက်ပါစေ ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာပေ ပို့ချခြင်းသည် ဒါနပါရမီ ဖြစ်၏။ ကျော်ကြားမှု၊ ဘုန်းကံကြီးမားမှု၊ လာဘ်လာဘ ပေါများမှုများကို ရည်ရွယ်၍ စာပေပို့ချနေခြင်းသည် ဒါနပါရမီ မဖြစ်။ စာပေပို့ချနေခြင်းထက် မပို့ချဘဲ အိမ်နေခြင်းက မြတ်သေးသည် ဟူ၍ အင်္ဂုတ္တရ် အဋ္ဌကထာ၊ သာရတ္တဒီပနီဋီကာများ၌ တိုက်ရိုက် ဆိုထားပါသည်။ စာပေ ပို့ချနေပါလျက် သေလွန်လျှင် ငရဲကျမည် ဆိုလိုသည်။´ဤသည်မှာ ၀စီကံနှင့် မနောကံတို့ အချင်းချင်း ရှေ့နှင့်နောက် မညီညွတ်သဖြင့် ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုရင်း ဖြစ်၏။ ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်သောအခါ ဓမ္မ၏ ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုအရ သေလွန်လျှင်ငရဲကျ၏။ ဤအကျိုးကား ငြင်းပယ်၍ မရသော အကျိုးဖြစ်၏။ ငြင်းပယ်၍ရသော အကျိုးကား မသေလွန်မီ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀၌မူ ဖြစ်ကောင်း၏။
စာပေအပို့အချကောင်းသဖြင့် မူရင်းရည်ရွယ်ချက် မည်သို့ရှိစေကာမူ ကျော်ကြားချင်လည်း ကျော်ကြားနိုင်၏။ လာဘ်လာဘ ပေါများချင်လည်းပေါများနုင်၏။ ဘုန်းကံ ကြီးမားချင်လည်း ကြီးမားနိုင်၏။ ဤသဘောကိုလောက၌ မြင်နိုင်၏။ စာပေပို့ချမှုလုပ်ငန်း၌သာမက အခြားသော ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက် လုပ်ငန်းများ၌လည်း ပစ္စက္ခဘ၀တွင် ကြီးပွားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများဖြင့် ကြီးပွားခြင်းဖြစ်၏။
အမှန်အားဖြင့် ဓမ္မနိယာမအရ အကုသိုလ် လုပ်ငန်းသည် ဆင်းရဲခြင်း အကျိုးကိုသာ ပေးရပြီး ကုသိုလ်လုပ်ငန်းသည်သာ ချမ်းသာခြင်းကိုပေးရမည်ဖြစ်၏။ သို့ပါလျက် ဤလောက၌ အကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြင့် ချမ်းသာခြင်းအကျိုးကို ရရှိကြသူများကို တွေ့နေရ၏။ သို့ဖြစ်လျင် အကုသိုလ်သည်လည်း ကောင်းသောအကျိုးကို ပေး၏ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်သည်လည်း မကောင်းသောအကျိုးကို ပေး၏ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုရမလိုဖြစ်၏။
ထိုသို့ ဆိုနိုင်ရန် ဤလောက၌ သက်သေအဖြစ် အထောက်အထား များစွာရှိ၏။ ဒုစရိုက် လုပ်ငန်းဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကို တွေ့ရ၏။ သုစရိုက် လုပ်ငန်းဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေနေသူများစွာကို တွေ့ရ၏။ ထို့ကြောင့် မျက်မြင်အထောက်အထားများအရ အကုသိုလ်က မကောင်းကျိုးကိုပေးသည်ဟူသော ဒေသနာသည် လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးကိုပေးသည်ဟူသော ဒေသနာသည်လည်းကောင်း ကမ္မနိယာမအရ မလွဲမသွေ မုချဧကန် မှန်သည်ဟု ဆိုရန်ခက်ကြောင်း ပြနိုင်ပါ၏။ အကယ်၍ ထိုသို့ဆိုနိုင်ပါကလည်း လက်ခံယုံကြည်ရန် ခက်သည်ဟူ၍ အကြောင်းပြနိုင်ပါ၏။
ထိုသို့ မျက်မြင် အထောက်အထားများ အရလည်း ဒုစရိုက်သမားများက ချမ်းသာပြီး သုစရိုက်သမားများက ဆင်းရဲသည်ဟုဆိုလျှင် ထိုသို့ဆိုသည်မှာ မှန်ပါ၏။ သမိုင်းအထောက်အထားများအရ လည်းကောင်း၊ စည်သူမင်းကြီးနှင့် သားတော် နရသူတို့၏ သာဓကကို လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးစာပေအရလည်း ဗိမ္မိသာရ မင်းကြီးနှင့် သားတော် အဇာတသတ်တို့၏ သာဓကကိုလည်းကောင်း ထောက်ရှုသဖြင့် အကုသိုလ် လုပ်ငန်းက ကောင်းကျိုးကို ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုဖွယ်ရှိသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
သို့ရာတွင် အကုသိုလ် လုပ်ငန်းဖြင့် ကောင်းကျိုးကို ရချင်မှရ၏။ မရသူများလည်းရှိ၏။ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြင့် မကောင်းကျိုးကို ရချင်မှ ရ၏။ မရသူများလည်း ရှိ၏။ အကုသိုလ် လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူတိုင်း ကြီးပွားသည်မဟုတ်၊ ကုသိုလ် လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးသူတိုင်းလည်း ဆင်းရဲမွဲတေသည် မဟုတ်။
အမှန်အားဖြင်း အကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့် ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းသည် လည်းကောင်း ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ကံနှင့်ကံ၏ အကျိုးတို့ လိုက်ရောညီထွေ မရှိခြင်းသည် ဓမ္မအပေါ်သစ္စာဖောက်ဖြင်း မည်၏။ ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်းခြင်းမှန်သမျှ ဓမ္မ၏ ဒဏ်ခက်ခြင်းကိုခံရမည်မှာ မလွဲမသွေ မှန်လှပေ၏။ သက်ရောက်အားနှင့် တန်ပြန် သက်ရောက်အားတို့၏ နိယာမအရ အပုပ်ချခြင်းခံရသော ဓမ္မသည် မိမိအပေါ် အပုပ်ချသူအား ပြန်၍ဒဏ်ခက်ရသည်မှာ မရှောင်လွှဲနိုင်သော နိယာမအရ ဖြစ်၏။ ထိုနိယာမအတိုင်း ဒမ္မက ဒဏ်ခက်မည်မှာ သေချာပါ၏။
သို့ရာတွင် `မည်သည့်အချိန်ဒဏ်ခက်မည်နည်း´ ဟူ၍အချိန်ကာလနှင့် ပက်သတ်ပြီး စဉ်းစားစရာသာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်ကာလအရ မသေချာသော်လည်း နိယာမအရ ဒဏ်မည်မှာ အလွန်ပင်သေချာပါ၏။
အကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင်း ချမ်းသာရာတွင် အကုသိုလ်က ကောင်းကျိုးပေး၍ ချမ်းသာသည်မဟုတ်။ ကုသိုလ်ပြုစဉ်က အကုသိုလ်ရောနှောသွားသဖြင့်သာ အကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာ ကုသိုလ်က ကောင်းကျိုးပေးခြင်း ဖြစ်၏။ ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြောင့် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းမှာလည်း မူလ အကုသိုလ်ပြုစဉ်က ကုသိုလ်ရောနှောပါဝင် သွားသဖြင့် ကုသိုလ်လုပ်ငန်း၌ အကုသိုလ်က မကောင်းကျိုး ပေးခြင်း ဖြစ်၏။
ဤသဘောကို `ပကတူပ နိဿယ ပစ္စယသတ္တိ´ဖြင့် အကုသိုလ်က ကုသိုလ်ကို ကျေးဇူးပြုသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ကုသိုလ်က အကုသိုလ်ကို ကျေးဇူးပြုသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုရ၏။
အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်အရ ဓမ္မသည် ကောင်းကျိုးကိုပေး၏။ အဓမ္မသည် မကောင်းကျိုးကိုပေး၏။ ဤနိယာမကို မည်သူကမှ ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန် မပြုနိုင်။ အကယ်၍ ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန် ပြုနိုင်သည်ဟု ယူလျှင်လည်းထိုအယူသည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူအရ အကုသိုလ်လုပ်ငန်းဖြင့် ကြီးပွားသည်ဟူ၍ မှတ်ယူသူအား လောလောဆယ် ဒုက္ခကို မတွေ့လျှင် သေခါနီးကာလ မရဏသန်နဇောစောချိန်မှစ၍ နောက်ပိုင်းတွင် မိမိပြုခဲ့မိသော အကုသိုလ်များက ကြီးစွာသောဒုက္ခကို ပေးမည်ဖြစ်၏။ အဇာတသက် မင်းအားလည်း ကြီးစွာသော ဒုက္ခကို ပေးခဲ့သည်။ နရသူမင်းအားလည်း ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုပေးခဲ့၏။ ယုံမှားဖွယ်မရှိ။
ထို့ကြောင့် နှုတ်က ဓမ္မကိုပြောလျှင် ကိုယ်နှင့်စိတ်ကလည်း ဓမ္မအတိုင်းဖြစ်ရလေအောင် သမ္မပဓာန် ထိုက်သော
၀ီရိယကို သုံး၍ ကျင့်ကြံ အားထုတ်အပ်ပါ၏ ။
ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ နှုတ်ကသာ ဓမ္မကို အော်ကျယ်ဟစ်ကျယ် ပြောပြီး ကိုယ်နှင့်စိတ်ကအဓမ္မကို တိတ်တိတ်ပုန်း ကျင့်ကြံ အားထုတ်မည်ဆိုပါက ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သစ္စာဖောက်ခြင်းခံရသော ဓမ္မကလည်း ပြန်လည်ဒဏ်ခတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း လေးနက်စွာ ယုံကြည်အပ်ပါ၏ ။
February 10, 2009 in ဘာသာရေးရာ, ဆောင်းပါး. Tags: ဘာသာရေးရာ, share
Socially Engage Buddhism
← ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်သုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ပါ
မမေ့အပ်သော နေ့တစ်နေ့ Feb 13 →
One thought on “ဓမ္မအပေါ် သစ္စာဖောက်မှုကြီ:”
ကောင်းလိုက်တာ ကံသဘောကိုနားလည်သွားပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်